Onyinye njem nlegharị anya ọhụrụ nke kọntinent nke ndị nlegharị anya nke Africa gosipụtara
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Tanzania » Onyinye njem nlegharị anya ọhụrụ nke kọntinent nke ndị nlegharị anya nke Africa gosipụtara
Njem njem • Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Akụkọ mkpakọrịta • Awards • Akụkọ Botswana na -agbasa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Etiopia Na -agbasa Akụkọ • Akụkọ kacha ọhụrụ na Ghana • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Akụkọ Na -eme Nigeria • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa ozi Qatar • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
N'ịghọta ọrụ dị mma nke ndị isi gọọmentị Afrịka na ndị isi ndị ọzọ na -arụ na mmepe na ịkwalite njem nlegharị anya n'Afrịka, Kọmitii Na -ahụ Maka Njem Nleta Africa (ATB) enyela ụfọdụ ndị isi ya ihe nrite maka njem nlegharị anya nke kọntinent.
N'okpuru nkwenye ATB, ndị nnọchi anya si na mpụga East Africa sonyere na ngosi. N'ime ha bụ ndị nnọchi anya si Etiopia, Botswana, Nigeria, Ghana, na Qatar.
Ụlọ ọrụ njem nlegharị anya na kọntinent nyere onyinye maka ndị isi n'Afrịka ndị na -akwado mmepe njem na ihe ịga nke ọma.
E nyere ndị mmadụ sitere na mpaghara ala niile nke Africa onyinye ATB Continental Awards.
Onye mbụ nwetara ihe nrite nke ATB Continental Tourism Awards 2021 bụ Onye isi ala Tanzania, Samia Suluhu Hassan, maka nkwanye ugwu na ntinye aka ya siri ike iji wee kwalite njem njem Tanzania.
Ngosipụta nke ndị a Ndị njem nlegharị anya nke Africa (ATB) Ihe nrite a mere na Satọde n'oge mmeghe mmeghe nke First East African Regional Tourism Expo (EARTE) nke na -eme n'obodo njem nlegharị anya na Northern Tanzania nke Arusha.
Onye isi ala ahụ duziri n'ịchịkọta akwụkwọ akụkọ Royal Tour nke dị na Tanzania Ebe nlegharị anya, n'etiti atụmatụ ndị ọzọ Onye isi ala ahụ mere iji kwalite mmepe njem na Tanzania na Africa.
E nyere ndị nlekọta njem nlegharị anya nke Afrịka ịkwalite na ịkwalite uto njem na mmepe n'ofe kọntinent ahụ.
N'inye onye isi ala Tanzania onyinye nturu ugo ya, onye isi oche ATB Mr. Cuthbert Ncube, kwuru na onye isi Tanzania ahụ hụrụ na ụlọ ọrụ njem na-alọghachi n'etiti ọrịa COVID-19.
Minista na -ahụ maka akụ na ụba na njem nlegharị anya nke Tanzania, Dr. Damas Ndumbaro, nwetara nturu ugo n'aha onye isi ala.
Ndị ọzọ a na -akwanyere ùgwù na nturu ugo kọntinent nke afọ 2021 bụ Minista njem nlegharị anya na ọdịbendị nke Sierra Leone, Dr. Memunatu Pratt, onye so na ndị isi na -abịa EARTE site na mpụga mpaghara East African Community (EAC).
Mgbe ọ natasịrị nturu ugo a, Dr. Pratt kwuru na obi dị ya ụtọ isonye na EARTE ma nwee obi ụtọ ịhụ ụdị ngosi njem nlegharị anya mpaghara na Afrịka. Ọ ga -eziga echiche na steeti ndị ọdịda anyanwụ Afrịka ka ha hiwe ihe ngosi njem nlegharị anya yiri ya.
Ndị ọzọ ritere ihe nrite nke ATB bụ onye minista na -ahụ maka akụ na ụba na njem nlegharị anya na Tanzania, Dr. Damas Ndumbaro; Maazi Najib Balala, onye minista na -ahụ maka njem na Kenya; Maazị Moses Vilakati, onye minista na -ahụ maka njem nlegharị anya nke alaeze Eswatini; na minista na -ahụ maka njem nleta na Botswana, Philda Kereng.
Ihe ngosi njem nlegharị anya mpaghara mpaghara EAC kwa afọ bidoro na Satọde, Ọktọba 9, na -agba ruo taa, Ọktoba 11. A na -enye ndị sonyere ohere ịga leta ebe ndị njem nlegharị anya na Tanzania ruo Ọktoba 16, gụnyere ebe nkiri anụ ọhịa na -ewu ewu.
Ihe ngosi njem nlegharị anya mpaghara, nke mbụ n'ụdị ya, nke emere na mpaghara East Africa, bụ maka ịkwalite ebe nlegharị anya dị na mba ndị otu EAC nke Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, na South Sudan.